ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): နည်းပညာနယ်ပယ်ကို သေနတ်နှင့် ချိန်ရွယ်နေတဲ့ စစ်အစိုးရ ... ပညာရှင်အားလုံး စုပေါင်းကာကွယ်ကြ (မင်းထက်ဘုန်းမြတ်)
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 8:56 AM
ဘုရားသာသနာ ၂၅၀၀ ပြည့်ပြီး
သိကြားသာသနာ ၂၅၀၀ နှစ်ထဲမှာရောက်နေပါတယ်
နတ်ကိုးကြ ဘိုးတော်တွေ ဘုန်းကြီးအတုအယောင်တွေပေါမယ်
တိုက်ကြ သေကြ အကုသိုလ်ပွားကြ
ဟုတ်တယ် .. မလင်လက်. ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေတာ ၊ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာဟာ ဘလော့ပဲ၊ ဘလော့နှင့် လူတွေကို information ဘယ်ဟာ ဆိုးသည် ဘယ်ဟာ ကောင်းသည်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမှာ. နအဖ ကလည်း လုပ်ပါတယ်။ ဝေဒ ဖြန့်ချီရေးဆိုတာလား၊ သူတို့ ဝေဒဖြန့်ချီဖို့ဆိုပြီး ကြံ့ဖွန့် အင်တာနက်စာမျက်နှာတောင် လုပ်ထားသေးတယ်။ အခုဆို ကျွန်တော်တို့ က အများကြီး အားသာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး စည်းလုံးကြရင် ဒီကောင်တွေ မခံပါဘူး။